Sida loo raaco taariikhda iibsashada taleefanka gacanta
1 Muhiimadda ay leedahay ogaanshaha da'da mobilka
2 Ikhtiyaarada lagu ogaanayo da'da mobilka
2.1 Ka hubi taariikhda iibka ee qaansheegta
2.2 Ka hubi da'da mobaylka adigoo isticmaalaya IMEI
2.3 Ka hubi taariikhda iibka iyada oo loo marayo dukaanka onlaynka ah
Haddii marar badan aad raadisay macluumaad ku saabsanSida loo ogaado da'da mobilka? oo ma liibaanteen, maanta nasiib baad leedihiin. Sababtoo ah maqaalkan waxaan ka jawaabi doonaa su'aashaas, adigoo ku siinaya dhammaan faahfaahinta ku saabsan beddelka kala duwan ee aad u baahan tahay si aad u gaarto.
Sidan, waxaan kuu sheegi doonaa sida aad ku ogaan karto adigoo isticmaalaya qaansheegta iibka mobaylka, iyadoo la isticmaalayo IMEI oo isku mid ah ama gelaya dukaanka dalwaddiinta ah haddii iibsigu ahaa mid online ah. Sidaa darteed, ha sugin in ka badan oo sii wad akhrinta si aad u caddeyso dhammaan shakiyadaada.
Muhiimadda ay leedahay ogaanshaha da'da mobilka
Ogaanshaha da'da taleefanka gacantu waa muhiimad weyn, maadaama habkaas aad ku ogaan karto inuu weli haysto damaanad ansax ah. Sababtaas awgeed, haddii aad dareento in taleefankaagu bilaabay inuu xumaado, uu ka gaabiyey sidii caadiga ahayd, ama uu barafoobayo, waa inaad xaqiijisaa taariikhda aad iibsatay.
Habkaas, waxaad ku ogaan doontaa waxaad samayn karto, maadaama ay jiraan dhowr siyaabood oo kale. Tusaale ahaan, haddii aad hesho taariikhda iibsashada taleefanka gacanta oo aad ogaato in uu lumay dammaanadda, waxaad u qaadan kartaa adeeg caadi ah oo idman si loo dayactiro.
Laakiin haddii aad hubiso taariikhda iibka, waxaad ogaatay in dammaanadku weli shaqeynayo, waxaad si toos ah ugu qaadan kartaa dukaanka aad ka soo iibsatay ama u geyn kartaa soo saaraha. Tani waxay muhiim kuu tahay inaad tixgeliso, sababtoo ah xasuusnoow marka aad iibsanayso mobilada inta badan waxay bixiyaan laba dammaanad.
Midka koowaad waa kan dukaanka, kan labaadna waa kan soo saaraha, sidaas darteed, iyadoo ku xiran taariikhda waxaad ogaan kartaa mid ka mid ah oo aad geyn doonto.
Ikhtiyaarada lagu ogaanayo da'da mobilka
Hubaal marka aad akhrido qodobkii hore oo aad ogaato muhiimadda ay leedahay ogaanshaha taariikhda iibka taleefanka mar kale waxaad la yaabi doontaa:Sida loo ogaado da'da mobilkal? Nasiib wanaag, jawaabta su'aashaas waa mid aad u fudud oo ah inaad runtii haysatid dhowr siyaabood oo aad ku ogaan karto macluumaadkaas.
Sababtaas awgeed, hoos ayaan ku xusi doonaa, si aad u go'aansato mid ka mid ah oo aad isticmaali doonto, sida ay suurtogalka tahay:
Ka hubi taariikhda iibka ee qaansheegta
Doorashada ugu horreysa ee lagu ogaanayo macluumaadkan waa hel qaansheegadka iibsiga ee telefoonka gacanta, inkastoo ay u muuqataa mid aad u cad, waxa ay soo baxday in ay ugu fudud ee dhammaan beddelka. Intaa waxaa dheer, sidoo kale waa xalka ugu dhaqsaha badan, sababtoo ah xusuusnow in, qaansheegtan ma aha oo kaliya faahfaahinta alaabta, laakiin waxa ugu muhiimsan waa in uu leeyahay taariikhda la soo saaro isla.
Goobta taariikhdani badanaa way kala duwan tahay, maadaama ay ku xidhan tahay nooca foojarka lagu siiyay. Xaaladdan oo kale, haddii ay ku siiyeen rasiidhka iibka, taarikhdu waxay ahaan doontaa meesha ugu hoosaysa.
Laakin haddii, taa lidkeeda, ay ku siiyeen qaansheeg laftirkeeda, waxaad heli doontaa taariikhda madaxeeda. Waxa kale oo jira noocyo, kuwaas oo taariikhda ay ka hooseyso macluumaadka iibiyaha wax yar ka hor faahfaahinta alaabta.
Waxa kaliya oo ay noqon doontaa arrin lagu xaqiijinayo nooca foojarrada aad haysato si aad u ogaato taariikhda saxda ah ee iibsashada. Iyadoo la tixgelinayo macluumaadkan iyo midkii aad ku akhriday qodobkii hore, waxaad ogaan kartaa muhiimadda ay leedahay badbaadinta qaan-sheegyada lagu siiyo markaad wax iibsaneyso.
Sababtaas awgeed waxaa lagugula talinayaa inaad ku kaydiso gal ama iskaan iyaga oo aanad ku kaydin oo keliya kumbuyuutarkaaga, laakiin sidoo kale ugu dir naftaada boostada. Sidaa darteed, waxaad haysataa kayd wanaagsan oo sidaas darteed iska ilaali inaad dhibaato gasho markaad u baahan tahay oo aadan heli karin.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan heli karin, waxaad sidoo kale ka codsan kartaa iibiyaha a nuqul shahaadeysan oo qaansheegta asalka ah. Waa nidaam qaadan kara wakhti, laakiin waxay shaki la'aan kaa caawin doontaa inaad ogaato da'da mobilada.
Ka hubi da'da mobaylka adigoo isticmaalaya IMEI
Si loo hubiyo da'da taleefanka mobile isticmaalaya IMEI waxaa ka mid ah, waxaad haysataa laba ikhtiyaar. Midka ugu horreeya waa adigoo galaya bogga soo-saaraha taleefanka, kiiskan waa inaad ogaataa in dhammaantood aysan ku siinin doorashadan.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad hubiso in soo saaraha ee adiga kuu ogolaanaya, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad samayso waa in aad hesho code IMEI ee mobile. Si tan loo sameeyo, waxaad si toos ah uga raadin kartaa sanduuqa uu yimid markii aad soo iibsatay ama waxaad ku heli kartaa adiga oo sameeya kuwan soo socda:
Fur codsiga "Telefoonka" ee mobilkaaga.
Ka dib calaamadeeyaha ku qor koodka soo socda adigoon xigashooyinka "* # 6 #".
Markaad dhammayso qorista koodka, nambarku wuxuu ka soo muuqan doonaa shaashadda IMEI waana inaad qortaa.
Kadib markaad haysato, waa inaad raacdaa tillaabooyinka soo socda si aad u ogaato taariikhda iibka:
Ka soo gal browserka aad dooratay ee ku yaal mareegta saaraha.
Marka aad gasho boggeeda guriga, dhagsii ikhtiyaarka "Xarunta Taageerada".
Hadda waxay kuxirantahay nooca taleefanka waxaad riixi doontaa mid ka mid ah xulashooyinkan "Hubi damaanad"ama" Raadinta dammaanad."
Ugu dambeyntii, ku qor lambarka IMEI ee moobilkaaga sanduuqa u dhigma ka dibna calaamadee "Search".
Marka la dhammeeyo tillaabooyinkan, dhammaan macluumaadka ku saabsan heerka dammaanadda taleefankaaga ayaa soo muuqan doona waxaana la soo bandhigi doonaa taariikhda iibka. Hadda, haddii ay dhacdo inaadan samayn karin tillaabooyinkan, waxaad yeelan doontaa inaad la tagto IMEI xarunta adeegga macaamiisha ee shirkadda uu telefoonku iska leeyahay.
Markaad timaaddo, waxaad u sheegaysaa maareeyaha inaad u baahan tahay inaad ogaato taariikhda iibka mobilka oo aad siiso IMEI isku mid ah.
Ka hubi taariikhda iibka iyada oo loo marayo dukaanka onlaynka ah
Haddii aad ka iibsatay moobilka a dukaanka internetka Ogaanshaha taariikhda saxda ah ee aad samaysay waxay noqon doontaa mid aad u fudud. Iyadoo la tixgelinayo in ay jiraan dukaamo badan oo iibka noocan oo kale ah lagu samayn karo, hoos, waxaan ku xusi doonaa qaar ka mid ah tallaabooyinka guud.
Way ku kala duwanaan karaan xoogaa, sababtoo ah waxay ku xirnaan doontaa waxyaabaha gaarka ah ee dukaan kasta, laakiin guud ahaan tani waa waxa aad sameyneyso:
Geli degelka aad wax ka soo iibsatay.
Hadda, geli magacaaga isticmaale iyo eraygaaga sirta ah sanduuqyada u dhigma.
Kadib, calaamadee "Enter", "Enter" ama "Galida" doorashadani waxay ku xirnaan doontaa dukaanka.
Markaad gasho akoonkaaga, dooro qayb la yiraahdo "My orders" ama "order status".
Dhammaan dalabaadka aad bixisay ayaa soo muuqan doona, markaa waa inaad raadisaa midka taleefanka gacanta.
Ugu dambeyntii, markaad hesho, fur oo aad dhammayso.
Markaad furto, waxaad awoodi doontaa inaad aragto dhammaan faahfaahinta alaabta, oo ay ku jiraan kuwa ugu muhiimsan, taas oo ah taariikhda iibsashada. Sideed ku ogaan kartaa, tan sida xulashooyinka intiisa kale ee la tilmaamay inay tahay beddel aad u fudud oo lagu ogaan karo da'da mobilkaaga.
Sidaa darteed, kaliya waa inaad go'aansatid ikhtiyaarka aad isticmaali doonto, sida ku cad macluumaadka maanta ee aad awooday inaad ogaato.
Haddii xogtan oo dhami ay kuu caddaatay oo aad hore u ogeyd sida loo ogaado da'da mobilka, faallo noogu dhaaf. Sidoo kale sii wad akhrinta tan blog, sababtoo ah waxaa laga yaabaa inaad xiisaynayso inaad wax ka barato mawduucan soo socda: Sida loo ogaado haddii nambar xanniban uu ku soo wacay.
Previous: post Previous: Download Jurassic World Evolution
Next: post Next: Sida loo rakibo Kali Linux